.:: Life is Light ::.: 2006
2 comments Posted by ShweMyat at 2:21 AM
Link [ http://www.shweparami.org ]
အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ) ရဲ့ တရားတော်များကို ကြည်ညိုနိုင်မယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်များ၊ မှတ်သားနာယူဖွယ်ရာ တရားစားများနဲ့ မွမ်းမံခြယ်သထားတဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တရားရေးနဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ သတင်းများကိုလည်း တင်ဆက်ထားပြီး ဆရာတော်ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်များကို MP3 ဖိုင်များအဖြစ် download ရယူနိုင်ပါတယ်။
14 comments Posted by ShweMyat at 11:02 AM
Here is the ultimate list of blogging tools. Takealook at the bottom of the post for information on the list and how you can take part.
Blog Promotion, Traffic and Marketing
BlogMad - Traffic exchange for blogs
BlogBurst - Blog syndication service
Link2Blogs - Link exchange system for blogs
BlogLinker - Automatic link exchange service
Zookoda - Email marketing mde for bloggers
KingPing - Ping over 20 services in one go
Ping-O-Matic - Ping over 20 services in one go
Feed Shark - Ping and promote your blog, feed and podcast
Pingoat - Ping over 40 services in one go
Blog Word Processors and Editors
WriteToMyBlog - Free rich text editor for blogging
Qumana - Blog Editor
BlogDesk - Desktop blog editing solution
Widgets, Add-Ons and Plugins
Polldaddy.com - Free polls for your blog
WidgetBox - Directory of popular widgets
Wordpress Plugins Database - A huge collection of plugins for wordpress
Widgetoko - Tracks new and popular widgets
BlogPolling - Free polls for your blog
Swicki - Community powered search for your blog
BlogBox - Various widgets for your blog
StuffaBlog - Enrich your blog with this content generator
Brilliant Button Maker - Makea80×15 button for your blog
IndieKarma - Micropayment system for bloggers
Blurb - Generate and printabook from your blog
Performancing - Blog advertising, stats and editing
Canvas - Designawordpress blog without code
Email Icon Generator - The name says it all
BlogTree - A family tree for blogs
Gravatar - The globally recognised avatar
BlogSitter - Findablogger to look after your blog while your away on holidays
Feed Tools and Syndication
Bloglet - Allows your readers receiveadaily email of your blog content
Feedburner - Popular feed managment and subscription tool plus feed advertising
MultiRSS - Replace mulitple feed buttons with just one
Feedmap - Show the location of your blog onamap
NewsGator - Web based RSS aggregator
FeedBlitz - Blogg and rss to email service
BlogLines - Web based feed reader
Memeorandum - Blog tracking and aggregating
Blog Advertising and Monetize Your Blog
Q-Ads - Insert text ads into your blog
Performancing - Blog advertising network
Chitika - Affiliate shopping network
BlogAds - Blog advertising network
Ether - Earn money selling what you say
Scoopt Words - Sell your blog content to the media
Blog Platforms and Hosting
Logahead - New blog ging platform with tags, ajax, widgets and more
Wordpress - Free and popular blog platform and hosting
Blogger - Free blog hosting and platform owned by Google
Live Journal - Blogging platform
Blogmarks.net - Keep track of your favorite posts and sites
Digg - Popular social bookmarking site
Del.icio.us - Another popular social bookmarking site
Blog Tracking and Statistics
Blogarithm - Receiveamorning email listing all of your blogs latest content
CrazyEgg - Find out where your visitors are clicking
MeasureMap - free and easy stats for you blog
Odeo - Record, upload and embed podcasts
Talkr - Turn your text blogs into audio using text to speech
BlogTalkRadio - Host your own talk back radio show
TalkShoe - Live and interactive podcasts
Sxore - Blog reputation and identity system
Technorati - Huge blog community and ranking system
MyBlogLog - Blog metrics and community
Cbox - Addafree hosted Tagboard to your blog
Geesee - Cross site chat
BlogPulse - Search the blogosphere
IceRocket - Blog search engine
Source From [ http://thatamazingperson.com ]
0 comments Posted by ShweMyat at 9:47 AM
This Christmas theme icons are available in both bitmap and vector formats. Feel free to use them on your personal or commercial projects.
[ . : : Link is Here : : . ]
0 comments Posted by ShweMyat at 9:13 AM
Happy Holidays to Everybody ^^
And All the Joy Overflow :)
0 comments Posted by ShweMyat at 5:49 AM
ကြယ်တွေက နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်ဆီက မိုးကြည့်နေကြတယ်
ဒိုင်ခွက်မှာ မီးမပါတဲ့နာရီကို ခက်ခက်ခဲခဲကြည့်မနေတော့ပါဘူး
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဟာ ငါ့အိပ်ချိန်လို့ပဲ သတ်မှတ်မယ်
ရှာဖွေလည်း မတွေ့ရှိနိုင်သော အရာတွေ များသထက်များလာလို့ပါ
ရှေ့နောက်ဝဲယာ ဘယ်မှာလဲ ငါ့ကိုဖြေသာစေမှာ
ဆေးဝါးနဲ့ ကုထုံးတွေ လွဲနေဆဲလား
ဟောဒါ ကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တာတွေပါလို့ ချပြနိုင်တဲ့တစ်နေ့မှာတော့
ခုတော့ ....................။ ။
By : Coral85
0 comments Posted by ShweMyat at 4:24 PM
HAPPY BIRTHDAY Wendy @ Stitch ! ! !
Labels: personal, wish
0 comments Posted by ShweMyat at 11:08 AM
December  ရက်နေ့က ထွက်ခဲ့တဲ့ Akon ရဲ့ Konvicted ဆိုတဲ့ Album အသစ်လေးပါ။ အောက်မှာ Download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
04 - I Wanna F**k You (Ft. Snoop Dog)
Labels: Download, muzik
The Pink Army [flash movie]
0 comments Posted by ShweMyat at 2:15 PM
0 comments Posted by ShweMyat at 8:20 AM
0 comments Posted by ShweMyat at 7:34 AM
all are free!!!!!
0 comments Posted by ShweMyat at 7:34 PM
Manager ကစားနည်းကိုမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကစားကြတဲ့ Gamer အတွက်ပါ။ ဘာမှလဲ Install လုပ်စရာမလိုဘူးလေ။ တော်တော်လေးကစားလို့ကောင်းတယ်ဗျ။
0 comments Posted by ShweMyat at 3:23 AM
ငါ နင့်ကို စောင့်နေပါတယ် အရင်နေရာမှာ
အရင်လို အကြင်နာတွေနဲ့ နာကျင်နေရင်းပါ ။
နှင်းတွေ ဟိုအရင်လို သည်းသည်းလှုပ် ကျမနေလည်း
ငါ နင့်ကို အရိုးခိုက်အောင် လွမ်းနေမိတုန်းပါ ။
ငါ နင့်ကို သတိတရနဲ့ ငေးကြည့်နေဖြစ်ဆဲပါ ။
နှစ်တွေ လတွေ ရက်တွေ နင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာမှာ
အရင်လို အေးစက်နေဦးမယ်ဆိုတာ သိနေလည်း
အရင်လို မှိုင်းပျေ၀၀ါးနေဦးမယ်ဆိုတာ သိနေလည်း
အရင်လို နေခြည်တွေပျောက်ဆုံးနေဦးမယ်ဆိုတာ သိနေလည်း
ငါ အရင်လို စောင့်လို့နေဦးမှာ ။ ။
Common Computer/Networking Answers
2 comments Posted by ShweMyat at 7:39 PM
Home networking wired
sharing files osx and XP
doingafresh install of xp http://www.theeldergeek.com/clean_installation_of_windows_xp.htm
how do i clear history of websites visited:
connect2computers with usb
If you need drivers the first stop should be the manufacturers website but there is also www.driverguide.com you have to register
tips for mac osx
wan v lan
resetting IE security http://www.malwarehelp.org/how-to-reset-internet-explorer-6-to.html
Passwording files in xp
loading windows on sata drive
file sharing win xp
the official site for our shop
installing cd drives
0 comments Posted by ShweMyat at 12:30 PM
ဂိမ်မာတွေအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ Site လေးပါ။Play Station, Play Station 2, Game Boy Advance,etc... စတဲ့ဂိမ်းတွေကို PC ပေါ်မှာ ကစားချင်ရင်တော့ ဒီ Site မှာရှိတဲ့ Emulators တွေထဲက တစ်ခုတစ်ခုကို Download လုပ်ပြီး Run လိုက်ရင် ဆော့လို့ရပါပြီ။
0 comments Posted by ShweMyat at 12:17 PM
Exam 'N' Buzy
0 comments Posted by ShweMyat at 9:35 AM
စာမေးပွဲ ဖြေမလို့ လုပ်နေရတာနဲ့ ဒီရက်ပိုင်း တွေ Post အသစ်တွေ လုပ်နိုင်မယ်တောင် မထင်ဘူး ။ လင်းလင်းရေ Sorry! နော်။ အိမ်ရှင်က အိမ်မှာကိုမရှိတာပါ။ ဘာပဲပြောပြော အမြဲဝင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ Exam ပြီးသွားရင်တော့ Post အသစ်တွေတက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
~~ Listening Songs~~
0 comments Posted by ShweMyat at 5:41 AM
အခုတလော သီချင်းဟောင်းလေးတွေ ပြန်နားထောင်နေဖြစ်တယ်။
ဒါက Sixpence None The Richer အဖွဲ့ရဲ့ Kiss Me ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
Green Day ရဲ့ Good Riddence(Time of Your Life)
ဒါလဲ Green Day ရဲ့ သီချင်း When I Come Around ပါ။
0 comments Posted by ShweMyat at 3:35 AM
မင်းနာမည်ရင်း ကိုယ်မသိ ကိုယ့်နာမည်လည်း မင်းမသိ
0 comments Posted by ShweMyat at 9:32 PM
My Favourite Skater !
0 comments Posted by ShweMyat at 8:10 PM
NEW DESIGN FOR MY DECK ! ! !
Training Website Hacking
0 comments Posted by ShweMyat at 8:16 AM
Hacking ကို ၀ါသနာပါလား။ ညတုန်းက ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့်နဲ့ ဒီ Website လေးကို တွေ့လို့။ Hacking ကို Training လုပ်ပေးတဲ့ site လေ။ စိတ်ဝင်စားရင် ဆော့ကြည့်ပါလား။ Challenge တွေ အများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်တော့ Level3ကနေမတက်သေးဘူး
0 comments Posted by ShweMyat at 5:43 AM
ကျွန်တော်လဲ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ ဘလော့ ကို တောင် ခြေဦး မလှည့်ဖြစ်ဘူး။ နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်လည်း စာမေးပွဲက ဖြေရပြီ။ စာတွေလဲမရသေးဘူး။
0 comments Posted by ShweMyat at 10:08 AM
1 comments Posted by ShweMyat at 9:24 PM
0 comments Posted by ShweMyat at 1:20 PM
0 comments Posted by ShweMyat at 12:52 PM
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ပုံလေးတွေက ရီရလို့ . . .
1 comments Posted by ShweMyat at 4:37 AM
Not to be outdone by Microsoft's recent release of Internet Explorer 7, Mozilla will release the second major version of its rival Firefox browser on Tuesday, October 24.
0 comments Posted by ShweMyat at 4:14 AM
၀မ်းနည်းလို့ သတိရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
တစ်ခါ သတိရတိုင်းသာ စုဗူးထဲကို
အခုချိန်လောက်ဆို ဘီလ်ဂိတ် ထက်
ငါ ချမ်းသာနေလောက်ရောပေါ့ . . .
ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ကဗျာလေးပါ. (ဘယ်စာအုပ်လဲတော့ မသိတော့ဘူး)
Labels: funny, poem
0 comments Posted by ShweMyat at 7:27 AM
Java Script Source Code 3000
0 comments Posted by ShweMyat at 9:26 AM
All of the scripts have been organized by category so you can find what you need quickly...
Labels: Download, Java Script, Tech
0 comments Posted by ShweMyat at 2:52 PM
ကိုယ့်စ်ိတ်ကြိုက်ဂိမ်းလေးတွေ မရေးချင်ဘူးလား။ ဘာလဲ ပရိုဂရမ် ကုဒ်ဒင်း တွေမရဘူးလို့ ပြောမလို့လား။
ရော့ ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကို အင်စတောလုပ်ကြည့်လိုက်။ [Download] ပြီးရင်း စိတ်ကြိုက် ဂိမ်းတွေ ထိုင်ပြီးရေးပေတော့။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီ ဆိုဒ်မှာ ကြည့်ပေတော့ဗျို့။ [Link]
အဲ. မေ့လို့ Full Version အတွက် Serial Key လေးတွေပါ ရထားတယ်။
Serial Number: 6F580A8996B5503F22F934DD
Labels: Download, game, Maker, Tech
0 comments Posted by ShweMyat at 2:18 PM
ငါခံစားဖို့ နှစ်သက်ရာ . . .
မင်းအချစ်များနဲ့ နွေးထွေးမှာ . . .
အိုး ငါ့လမင်းလေး မင်းကို
အဝေးကနေ ငါချစ်ဦးမှာ . . .
အဝေးကနေချစ်ဦးမှာ . . .
လှိုင်ဦးမော် ရဲ့နောက်ဆုံး အယ်ဘမ် ထဲက သီချင်းလေးပါ . . .
ဒီ လင့်ခ်မှာ ဒေါင်းလုတ်ချလို့ ရပါတယ်။ [Link]
ကျွန်တော့်လို ဒိုးလုံး ခရေဇီ တစ်ယောက်အတွက်တော့ လှိုင်ဦးမော်ဟာ ဒိုးလုံး အလွမ်းပြေပေါ့။
Labels: Hlaing Oo Maw, muzik
0 comments Posted by ShweMyat at 10:12 PM
Linn Happy Birthday . . .
Have A Delightful Life Forever . . .
And Peace Be With You . . .
Good Luck, Good Health And May God Bless You Always . . .
Best E-Book Site For Me!
3 comments Posted by ShweMyat at 9:41 AM
Hello .....I hadaEbook Site.
Many ebooks in this site...
Especially for Computer and IT.
Some of the Category are:
Web Page ........ and more.... !
Address is .. [here]
5 comments Posted by ShweMyat at 1:19 AM
Here are some of the Cartoon Pictures of Rock Star Bands
^^System Of A Down^^
Here are [Link] of Rock Star Cartoons
2 comments Posted by ShweMyat at 2:28 AM
. . . so miss......